Fridge Fluorocarbon China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fridge Fluorocarbon - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 21 vokatra ho an'ny Fridge Fluorocarbon)
Ny tsy fahasalamana Fluorocarbon Kilaometatra ho an'ny Fanamainana Anarana simika: Perfluorohexene Mazava ny endriny fa tsy misy loko sy mangarahara ary tsy misy brenim-bovoka. Azo ampiasaina ho solvent mpanadio izy io ao amin'ny solvent tahaka ny vahaolana etona misy fluorine. Ny vahaolana momba ny fluoride...
Fluorocarbon Kilaometatra ho an'ny Lithium Battery Powered Car Manana tombontsoa lehibe ny chimie fluorine, satria lasa singa manan-danja kokoa ny chimiophile ny taona faha-21. Mampiasaina betsaka amin'ny fitaovana elektronika fanamafisana ny fitaovana elektrônika izy io, indrindra amin'ny...
Fiarovana Fluorocarbon ho an'ny hery nokleary 47 ° C tiroida TUWF-47 , 110 ° C turbulent point TUWF-110 , 165 ° C tiroida TUWF-160 Anarana simika: Perfluorohexene Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay manana dielectric avo. I T C ooling ny hafanana-niteraka ny angovo...
Fiarovana Fluorocarbon ho an'ny mpampiantrano lehibe mpampiantrano Anarana simika: Perfluorohexene Ny andiam- pahaterahana ao amin'ny fluorine dia vaksiny tsy misy ozona , izay manana dielectric avo. Io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fotoana samihafa amin'ny fanodinana hafanana hafanana. Azoko atao...
Fridge Fluorocarbon Fandroana Fluorocarbon Perfluorocarbon Fiaramanidina Flow Fluorocarbon For Refrigerant Fluorocarbon Inverter Abrasion Resistance Fluorocarbon Ranoka perfluorocarbon Fiaramanidina fluoro-karbônika